Heung-min Nwatakịrị Ụmụaka Akụkọ nke Na-enweghị Nkọwa
Home ASIAN STARS Heung-min Nwatakịrị Ụmụaka Akụkọ nke Na-enweghị Nkọwa
LB na-enye Full Story of a football football best known by the nickname; 'Sonaldo'. Nwa anyi bu Heung-Min nwa Akụkọ ya na akwukwo ihe omuma Eziokwu na-ewetara gi akuko zuru oke nke ihe di egwu site na nwata rue oge. Ihe omumu ya bu ihe omuma ya tupu ama aha ya, ndu ezinulo ya na otutu ndi mmadu. Enweghị n'ihu adieu, ka ịmalite
Heung-Min Nwa Nwata Akụkọ nke Na -Oge mmalite
Heung-Min Nwa mụrụ na 8 July 1992 na Chuncheon, South Korea site n'aka Wong Jung Son (nna) na Eun Ja Kil (nne). Nne na nna nwere mmasị ịga njem. Nwa ji ọtụtụ afọ ya na New Zealand ebe ọ gara Mission Heights na usoro mgbanwe iji mee ka asụsụ Bekee na akwụkwọ ya dịkwuo mma.
Ezinụlọ ya kwagara ebe ahụ mgbe ọ bụ 3. Ọ laghachiri na South Korea mgbe ọ dị afọ 9 tupu ya aga ụlọ akwụkwọ elementrị Dongbuk ebe ọ gụsịrị akwụkwọ nke ọma. Ịhụnanya ya maka football malitere n'ebe ahụ na elementrị ya ruo n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị. N'ụzọ dị mwute, nwa si n'ụlọ akwụkwọ sekọpụrụ na-erughị otu afọ mgbe ọ malitere.
O kpebiri idebanye maka ụlọ akwụkwọ FC Seoul, otu ụlọ ahụ na-agbachitere ndị Spurs Lee Young-pyo kpọọ maka. Ka ọ na-enwe ọganihu n'egwuregwu football, nwa na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ ahụ mgbe ọ bụ nwata. O mere ya ruo 2008. N'oge ahụ, onye nlereanya ya bụ onye na-etiti Lee Chung-yong, nke na-egwu egwu ugbu a Crystal Palace.
Heung-min Nwatakịrị Ụmụ Akụkọ Akụkọ Ọhụụ -Ndụ Ezinụlọ
Nna nna, Nwa Wong-jung bụ onye na-agba chaa chaa ezumike nká nke ghọrọ onye nchịkwa.
Ọ na-egwuri egwu maka Team Team South Korea. Laa azụ n'oge ọ na-egwu egwu, ya na Mauricio Pochettino gbara enyi. Nke a na-akọwa ihe kpatara nwa ya ji nwee mmasị dị ukwuu maka uwe na-eme N7 na oge egwuregwu na Tottenham.
Nne nwa ya, Eun Ja Kil bụ onye na-akwado nwa ya mgbe niile. O nyeere ya aka ịrị elu ya nke ihe ịga nke ọma n'agbanyeghị mkpebi ya ịhapụ ụlọ akwụkwọ.
Dị ka Heung-min Nwa "Nne m nwere ịhụnanya dị ka eluigwe, ọ nọ n'ebe ahụ n'ihi na ọ dị arọ ma dị njọ". Heung-min Nwa nwere nwanne nwoke okenye 'Heung-yun Ọkpara'. Ọ bụ a mụrụ na 18 January 1989.
Heung-yun Nwa bụ onye nlekọta ugbu a nwanne ya nwoke nke tọrọ.
Heung-min Nwatakịrị Ụmụ Akụkọ Akụkọ Ọhụụ Na -Ndụ mmekọrịta
Nwa Heung Min enwere mgbe nile ka ọ na-ekpochapụ mkparịta ụka ndị nwoke na nwanyị na ndị Hong Kong dị iche iche. Ya na nwa klas ya mbụ bụ Yoo So Young enwewo ọhụụ na nso nso a na ụbọchị.
Ọ hụrụ nwa ya n'anya ịzụta onyinye dị oke ọnụ. N'ajụjụ ọnụ ekwentị na 'Eziokwu ahụ', Yoo So Young shared, "Heung Min na m nwere ezi mmetụta n'ebe ibe. Ọ na-agwa m mgbe niile na m nọ ya gburugburu na-enye ya ike. Achọrọ m ịnọgide na-enwe mmetụta miri emi a n'ụzọ mara mma. "
Mmekọrịta abụọ ahụ dịgidere nanị otu afọ gara aga Heung Min Ọkpara malitere ọzọ na Minah. Bang Min-ah (a mụrụ May 13, 1993), mara amara karịa Minah, bụ onye na-abụ abụ South Korea na onye na-eme ihe nkiri.
Minah ekpughewo na ya na Son Heung Min na-aga ugboro abụọ na ezi mmetụta.
Mgbe ya na enyi ya na-agbarịta ibe ya ume, Minah na Son Heung Min malitere ịmalite inwe ezi ihe tupu ya agaa na ndị òtù ya na Germany. Ọ bụ mmekọrịta dị anya ka ha kewara. Ha abụọ dị ha mkpa mgbe niile na ọrụ ha na mpaghara ha.
Heung-min Nwatakịrị Ụmụ Akụkọ Akụkọ Ọhụụ Na -Ọrụ na Nchịkọta
Heung-min Nwa Ọrụ na Nchịkọta
Na 2008, nwa si na High School wee banye Hamburger SVagụmakwụkwọ ntorobịa mgbe ọ dị afọ 16.
Na 13 June 2013, Flo Rida feat Leverkusen kwadoro ntanye nke nwoke maka ihe a na-ekwu banyere ya bụ 10 nde, nke kachasị nyefe ego ụlọ ọrụ ahụ akwụtụla n'akụkọ ihe mere eme ya. O kwetara ka ya na ndị otu afọ rụọ ọrụ afọ ise. Nwa gbanwere ngwa ngwa na ụlọ ọhụrụ ya n'oge gara aga, na-atụle ihe mgbaru ọsọ atọ n'ime mmalite ihu atọ mbụ ya maka ndị otu na egwuregwu ngosi (megide 1860 Munich, Udinese na KAS Eupen).
Na 28 August 2015, Ọkpara sonyeere Premier League club Tottenham Hotspur maka £ 22 (€ 30) na nkwekọrịta afọ ise, na-akwado ikike ọrụ na ịkwụsị mba.
Heung-min Nwatakịrị Ụmụ Akụkọ Akụkọ Ọhụụ Na -Kasị egwu Asia Player na History
Enweela ọtụtụ ajụjụ gbasara Tottenham na-eme ka ego buru ibu maka obere ihe a mara amara na South Korea, bụ Son Heung-min. N'elu £ 22m, nwa ga - abụ Asia kachasị mma na football history, £ 7m karịa ihe Manchester United kwụrụ maka Shinji Kagawa na £ 8m karịa AC Milan kwụrụ ụgwọ maka Keisuke Honda.
N'agbanyeghi na edere ya na 2001 site n'aka Japanese Hidetoshi Nakata, onye si na Rom gaa Parma maka nde 25. O kwere nkwa iji gosi na ndị nkatọ ya ezighị ezi site na ịkwụghachi obi ike Spurs na-akwụ ya.
"Ọ na-adị m ka ọ bụ ọrụ, dịkwa mpako n'ihi na Tottenham ji m kpọrọ ihe. Ọ dị ezigbo mkpa ka ndị egwuregwu nwee mmetụta dị oke ọnụ. Ugbu a, m ga-egosi na m bara uru, " ọ bụ London London Standard Standard kwuru ya.
Heung-min Nwatakịrị Ụmụ Akụkọ Akụkọ Ọhụụ Na -Inweta Ohere Ahịa Nye Spurs
Nwa ya bu kpakpando buru ibu n'onu ya South Korea - nke Daniel Levy, onye nwe Tottenham amaghi. Ebe ọ bụ na ọ bịarutere Spurs, Ọkpara ebulila ahịa ahịa ụwa niile na ndị ọhụrụ na-agbanye ụwa.
Heung-min Nwa Fans si South Korea
Nke a bụ nchegbu mgbe nile maka ndị otu Njikọ Njikọ na Spurs nwere obi ụtọ na Ọkpara nwere ike mepee ọnụ ụzọ maka ha. Ọbụna a kọọrọ na ọ bụ Ọkpara bụ isi ihe kpatara ejiji ejiji na Leverkusen na ngwá electronic LG. Ha emeghi ya mgbe ha hụrụ na Ọkpara na-ahapụ ụlọ ọrụ ahụ.
Heung-min Nwatakịrị Ụmụ Akụkọ Akụkọ Ọhụụ Na -Echere Ihe Mgbaru Ọsọ Dị Ike Tupu Ịnweta Ọkụ
A ga-ejide gị na ụfọdụ n'ime mgbalị dị mma ọ na-agbanye n'ime akpa yabasị n'oge oge ya na Germany. Lee n'okpuru;
Nwere ike 19, 2018